F108 Epoxy nrapado maka aluminium ụgbụgbọ mmanụ a panelụ, China F108 Epoxy nrapado maka aluminium n'ụgbụgbọ mmanụ a Manufụ Manufacturers, Suppliers, Factory - Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd
Ị nọ ebe a : >lọ>Product>Nrapado & mama>Epoxy Composite nrapado usoro
F108 Epoxy nrapado maka aluminom n'ụgbụgbọ mmanụ a panelụ
Packaging Details: Plastic akpa
Oge Mbuga ozi: Gburugburu ụbọchị ọrụ 15
Tụkwasịnụ Ikike: 10 ton / Tọn kwa ụbọchị
BEECORE epoxy nrapado F108 bụ a abụọ-akụrụngwa, ụlọ okpomọkụ na-agwọ, elu arụmọrụ bughi nrapado. A na-etinye ya maka ogwe ụgbụgbọ mmanụ a aluminumụ aluminom. Ọ nwere ike nkekọ dị elu, ike ịkwa osisi na enweghị mmiri mmiri ọwụ. Ọ dịghị peculiar isi na oghom mmetụta na gburugburu ebe obibi na ọrụ.
● A na-ejikarị ngwaahịa a emekọ ma jikọta nkume dị n'ime ụlọ, dịka ijikọta na ịkwanye marble & granite wdg na mgbidi ụlọ ma ọ bụ na mgbidi mgbidi na metal, nwekwara ike iji ya maka ijikọ ihe dị iche iche dị ka nkume, metal, ihe nkedo, ngọngọ ciment, brik ụrọ wdg.
A-ed A na-eji ya maka ijikọ onwe ya na nke ígwè, seramiiki na osisi PVC ebe a na-achọ ebe ike dị elu na ikepụ ike na-eguzogide, dị ka ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, mgbakọ moto.
O nwekwara ike iji ya mee ihe maka njikọta akụkụ dị iche iche dị iche iche.
● Ike njikọta
● Ekwesịrị itinye ya n'ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ime ụlọ okpomọkụ dị ala, oge ka mma agaghị agafe ọnwa 6-12.
A-● Ngwaahịa ga-stocked ke akọrọ, ventilet na jụụ ebe, adị ndụ bụ otu afọ, nwere ike ịga n'ihu na-eji ma ọ bụrụ na ule dị mma.
Product Ngwaahịa a bụ ngwaahịa dị ize ndụ, a ga-ewepụ ya na ọkụ, ọkụ ọkụ, zere mmiri ozuzo na anwụ na-acha, na-egbu oge na-ebugharị, ma zere mmetụta, ntụgharị, mpịakọta wdg.
Aluminium mmanụ abụ nke isi
Ìhè na Ike Dị Ike Na-adịkarị Micro-porous Aluminium Mmanụ a Coreụ isi Akụrụngwa maka ingslọ
Ogo di elu ma nwee ume di elu nke ugbo elu Aramid ebuanu na iguzogide corrosion
5-Axis CNC machining Center maka mejupụtara, Aerospace, Automotive & Mbupu